Tag: dhizaini | Martech Zone
Dhizaini Ndicho Chinyararire Mumiriri weBrand Yako
Chipiri, Gunyana 5, 2021 Chipiri, Gunyana 5, 2021 Anas Hassan
Dhizaini inokanganisa inogona kukubatsira kupfuura vakwikwidzi vako. Sekureva kweDesign Management Institute, makambani akasarudza dhizaini yekumanikidza akaonekwa achikunda mamwe makambani aine asina kusimba dhizaini pane S & P index ne219%. Kune rimwe divi, ongororo yaTyton Media yakagumisawo kuti 48% yevanhu vanoona kutendeseka kwebhizinesi kuburikidza neyakagadzirwa webhusaiti. Aya matanho anoenderana nepfungwa yemukurumbira graphic dhizaini, Paul Rand uyo aifunga dhizaini seakanyarara
Denda rakakanganisa zvakanyanya kushambadzira kwevatengi sezvo mabhizinesi akagadziridzwa kuzviito zvehurumende zvakatorwa kuyedza kudzivirira kupararira nekukurumidza kwe COVID-19. Sezvo misangano yakavharwa, vatengi veB2B vakafambisa pamhepo kune zvemukati uye zviwanikwa zvekuvabatsira kuburikidza nematanho erwendo rwevatengi veB2B. Chikwata kuDigital Marketing Philippines yaisa pamwechete iyi infographic, B2B Yemukati Yekushambadzira Maitiro mu2021 iyo inotyaira kumba 7 maitiro ari pakati pekuti B2B zvemukati
Canva: Kickstart uye Batanidza Yako Inotevera Dhizaini Dhizaini
Chitatu, Nyamavhuvhu 18, 2021 Chitatu, October 13, 2021 Douglas Karr
Shamwari yakanaka Chris Reed yakatumira mameseji kwandiri ichibvunza kana ndaive ndapa Canva kuyedza uye akandiudza kuti ndaizoida. Akanyatsotaura ... Ndakazviedza kwemaawa mashoma uye ndakanyatso fadzwa nehunyanzvi magadzirirwo andakakwanisa kugadzira mukati memaminitsi! Ndiri fan hombe yeIllustrator uye ndashandisa iyo kwemakore mazhinji - asi ini ndakagadzirwa-ndakadenhwa. Ini ndinotenda kuti ndinoziva yakanaka dhizaini
Kumusoro kwerwizi, Upselling, uye Yekunze Kwekutengesa Mikana Yekukura Kwebhizinesi
Svondo, Kukadzi 7, 2021 Svondo, Kukadzi 7, 2021 Douglas Karr
Kana iwe ukabvunza vanhu vazhinji kwavanowana vateereri vavo, iwe unowanzo gamuchira mhinduro nhete. Yakawanda kushambadzira uye kushambadzira zviitiko zvine chekuita nesarudzo yevatengesi yerwendo rwemutengi… asi izvo zvakatononoka? Kana iwe uri yedhijitari shanduko yekubvunza yakasimba; semuenzaniso, iwe unogona kuzadza zvese zvese muspredishiti nekungotarisa tarisiro yako yazvino uye kuzvimisikidza iwe kumatekisheni aunonyatsoziva nawo. Unogona kuzviita
Abstract: Shandira pamwe, Shanduro, uye Handoff Yako Chigadzirwa Dhizaini
Tiri kushanda nekambani yenyika izvozvi kukudziridza tsika yeKushambadzira Cloud maemaema matemplate kune yega yega madhipatimendi uye mabhizinesi mayuniti Nekuti vanobatana, makondirakiti, uye vagadziri vese vari kure, dhizaini akagadzira ake mockups uye akashanda pamavhezheni neboka rake rehutungamiriri - ndokuzvipa kuchikwata chedu kuti chiteerere coding uye kuitisa. Dhizaina akandizivisa kuna Abstract. Abstract chishandiso chekudyidzana pamhepo cheMac uko kambani yako, makondirakiti,